Nhau dzeBhaibheri: Vanhu vaMwari Vanobva Bhabhironi - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Anenge makore mairi apfuura chifo chokutapwa kweBhabhironi navaMedhe navaPersia. Uye tarira chiri kuitika zvino! VaIsraeri vari kubva muBhabhironi. Vakasunungurwa sei? Vakaendeswa naani?
NaKoreshi, mambo wePersia. Kare Koreshi asati aberekwa, Jehovha akaita kuti muprofita wake Isaya anyore nezvake: 'Uchaita sezvandinoda kuti uite. Masuo achasiiwa akakuzarukira kuti utape guta.' Koreshi akatungamirira mukutapwa kweBhabhironi. VaMedhe navaPersia vakapinda muguta usiku napamasuo akanga asiiwa akazaruka.
Asi muprofita waJehovha Isaya akataurawo kuti Koreshi aizoraira kuti Jerusarema netembere yaro zvivakwezve. Ko Koreshi akaraira here? Hungu. Koreshi anoudza vaIsraeri izvi: 'Endai, zvino, kuJerusarema mundovaka tembere yaJehovha, Mwari wenyu.' Uye vaIsraeri ava vari kuenda kundoita izvi chaizvoizvo.
Asi handi vaIsraeri vose vari muBhabhironi vangadzokera rwendo rurefu kuJerusarema. Rwurefu kwazvo namamaira anenge 500 (makiromita 800) uye vazhinji vakwegura kana kuti vanorwara zvokusagona kuenda kure kwazvo.Uye pane zvimwe zvikonzero nei vamwe vanhu vasingaendi. Asi Koreshi anoti kuna vasingaendi: 'Ipai sirivha nendarama nezvimwe zvipo vanhu vari kudzokera kundovaka Jerusarema netembere yaro.'
Zvino, zvipo zvizhinji zvinopiwa ava valsraeri vari kuenda Jerusarema. Uyewo, Koreshi anovapa ndiro nemikombe zvakanga zvatorwa naMambo Nebhukadnezari mutembere yaJehovha paakaparadza Jerusarema. Vanhu vane zvinhu zvizhinji zvokudzokera nazvo.
Pashure peinenge mwedzi mina yokufamba, valsraeri vanosvika Jerusarema nenguva chaiyo. Makore 70 chaiwoiwo chifo chokuparadzwa kwegutaro, uye nyikayo yakasiiwa isitongorina vanhu. Asi kunyange valsraeri vadzoka zvino munyika yekwavo vachava nenguva dzakaoma, sezvatichanzwazve.
Sezvinoratidzwa pamufananidzo, vaIsraeri vari kuitei?
Koreshi akazadzisa sei uprofita hwaJehovha kuburikidza naIsaya?
Koreshi anoudzei vaIsraeri vasingagoni kudzokera kuJerusarema?
Koreshi anopa vanhu chii chokuti vadzokere nacho kuJerusarema?
Zvinotorera vaIsraeri nguva yakareba sei kudzokera kuJerusarema?
Kwapera makore akawanda zvakadini kubva pakasiyiwa nyika yacho isina vanhu zvachose?
Verenga Isaya 44:28 uye 45:1-4.
Jehovha akasimbisa sei chokwadi chokuzadzika kwouprofita hwaiva nechokuita naKoreshi? (Isa. 55:10, 11; VaR. 4:17)
Uprofita hwaIsaya pamusoro paKoreshi hunoratidza chii nezvokukwanisa kwaJehovha Mwari kufanotaura nezvenguva yemberi? (Isa. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pet. 1:20)
Verenga Ezra 1:1-11.
Tichitevedzera muenzaniso wevaya vasina kukwanisa kudzokera kuJerusarema, isu nhasi ‘tingasimbisa sei maoko’ eavo vanokwanisa kupinda mubasa renguva yakazara? (Ezra 1:4, 6; VaR. 12:13; VaK. 4:12)